वैदेशिक संयुक्त लगानी २१ अर्ब
चालू आर्थिक वर्षमा रू. २१ अर्ब ४६ करोडका संयुक्त वैदेशिक लगानीका उद्योगले स्वीकृति पाएका छन् । उद्योग विभागले वैशाख मसान्तसम्म संयुक्त वैदेशिक लगानीका १ सय ३३ उद्योगहरूको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । गत वर्ष २ सय ३० विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूलाई विभागले उद्योग स्थापनाको स्वीकृति दिएको थियो ।
गत फागुनसम्म यस्ता ९४ उद्योगले स्वीकृति पाएका थिए । ती उद्योगहरूको कुल लगानी रू. ९ अर्ब थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब ७४ करोड विदेशी लगानी थियो भने ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नेपाली कम्पनीको लगानी हुने उल्लेख थियो । स्वीकृति पाएका उद्योगहरू निर्माण, ऊर्जा, उत्पादन, खनिज, सेवा तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित छन् ।
ऊर्जामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ३१ होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि ६० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव छ । सेवा उद्योग सञ्चालनका लागि ४२ करोड र उत्पादन उद्योगको लागि ३० करोड लगानीको प्रस्ताव छ । खनिज उद्योगका लागि ७ करोड र निर्माण उद्योगमा २ करोड लगानी प्रस्ताव छ । सञ्चालनमा आएपछि ४ हजार ३ सय ६८ जनाले यी उद्योगबाट रोजगारी पाउनेछन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रकम घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वीकृति पाएका विदेशी कम्पनीहरूले ५ अर्ब २४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
अंक ४१, २०६७, जेठ ३१–असार ६
दोस्रो घण्टामा ०.२७% ले बढ्यो नेप्से, नागरिक लगानी कोषको सर्वाधिक कारोबार कारोबार (१ बजेको अपडेट)